सावधान! तपाईलाई खाना खाने बित्तकै पेट दुख्छ ? यसले जनाउँछ खतराको घन्टी:: Naya Nepal
सावधान! तपाईलाई खाना खाने बित्तकै पेट दुख्छ ? यसले जनाउँछ खतराको घन्टी
एजेन्सी । पेट दुख्ने समस्या नभएका मानिस सायदै होलान्। गम्भीर रुपमा होस् या सामान्य प्रकारको नै किन नहोस् पेट दुख्ने समस्या सबै मानिसले भोगेका हुन्छन्। त्यसैले पेट दुख्नुलाई धेरैले सामान्य रुपमै लिने गरेको पाइन्छ। तर, कहिलेकाहीँ पेट दुख्ने समस्याबारे हेलचेक्र्याँइ गर्दा पेटमा अल्सर वा क्यान्सर भएर पेटभित्रका कुनै अंग शल्यक्रिया गरेर फ्याल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ।
क्रोन्स डिजिजि भनेको मुखदेखि सानो आन्द्रा, ठूलो आन्द्रा हुँदै मलद्वारसम्मै सानो९सानो घाउ आउने समस्या हो। यस्तो समस्या भएकाहरुलाई खाएको खानेकुराले घाउमा ठोक्किने भएकाले खाना खाँदा पेट दुख्न सक्छ।
अल्सर भएर खाना जाने नली ९पाइलोरिक रिङ० साँघुरिएको भएमा पनि खाना खाँदा पेट दुख्ने गर्छ। यसले गर्दा पेट ढाडिँदै आउँछ र पेट नराम्रोसँग दुख्छ।
पेट दुख्नुको कारण कब्जियत पनि हो। अधिकांश मानिसलाई कब्जियतका कारण पेट दुखिरहेको हुन्छ। जति खाना खाए पनि दुईदेखि तीन तीन दिनसम्म दिसा हुँदैन। यसलाई ुइरिटेबल वल सिन्ड्रोमु भनिन्छ। पर्याप्त मात्रामा ग्यास पास नभएका कारण पेट ढाँडिरहन्छ र दुखिरहन्छ।
कार्वोनेटेड खानेकुरा ९जस्तैः भुटेको, तारेको, पोलेको मासुको परिकार आदि० धेरै खाएमा पेट दुख्ने समस्या आउँछ।
ग्यासयुक्त पेय पदार्थ ९कोक, फेन्टा, पेप्सी आदि० पिउँदा पेटमा ुग्यास फर्मेसनु हुन्छ र पेट दुख्न थाल्छ। यस्तै बन्दा, काउली, प्याज, लसुन, केराउ आदि ग्यास फर्मेसन गर्ने खानेकुरा खाँदा पनि कसैकसैलाई पेट दुख्न सक्छ।
खाना खाँदा आरामले बिस्तारै खानुपर्छ। छिटो९छिटो वा हतारमा खाँदा पनि पेट दुख्ने समस्या आउँछ। छिटोछिटो खाना खाँदा खानासँगै हावा पनि पेटभित्र जान्छ। जसले पेटमा ग्यास भरिन्छ र पेट ढाडिएजस्तो भएर दुख्ने गर्छ।
१.खाना समय लगाएर विस्तारै चपाएर खाने।
२.चना, केराउजस्ता गेडागुडी खाँदा एक दिन भिजाएर राख्ने र अर्को दिन सफा गरेर राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने।
३.नियमित व्यायम गर्ने।
४.बढी चिल्लो, पिरो, अमिलो खाने कुरालाई कम गर्ने।
५.साँधेको, पोलेको, तारेको मासुका परिकार सकेसम्म नखाने।
६.धूमपान र मध्यपानको प्रयोग नगर्ने।
७.पेट दुखेको निको पार्न अनुमानका भरमा औषधिको प्रयोग नगर्ने।
८.प्रसस्त शुद्ध पानी पिउने।
९.जङ्क फुडको प्रयोग नगर्ने। सकभर घरमै पकाएको ताजा खानेकुरा खाने बानी बसाल्ने।